Bit By Bit - agba nwere - 4.5.3 Mee ngwaahịa gị
Ịmepụta ngwaahịa gị bụ ụzọ dị oke egwu, nnukwu ụgwọ ọrụ. Ma, ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, ị nwere ike irite uru site na ntinye aka nzaghachi ziri ezi nke na-eme nchọpụta pụrụ iche.
N'ibute ụzọ nke ịmepụta nnwale nke aka gị ọzọ, ụfọdụ ndị nchọpụta na-ewu ihe ndị ha nwere n'ezie. Ngwaahịa ndị a na-adọta ndị ọrụ ma na-eje ozi dị ka nyiwe maka nyocha na ụdị nyocha ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ìgwè ndị na-eme nchọpụta na Mahadum nke Minnesota kere MovieLens, nke na-enye n'efu nkwenye ndị na-abụghị ndị azụmahịa. MovieLens ejirila rụọ ọrụ kemgbe 1997, na n'oge a, 250,000 ndị ọrụ edebanye aha enyela ihe karịrị 20 nde Fim maka ihe karịrị 30,000 nkiri (Harper and Konstan 2015) . MovieLens ejirila ọrụ nke ndị ọrụ na-eduzi nchọpụta magburu onwe ya site na ịnwale usoro sayensị sayensị gbasara onyinye maka ngwá ahịa ọha (Beenen et al. 2004; Cosley et al. 2005; Chen et al. 2010; Ren et al. 2012) iji kwurịta okwu nsogbu algorithmic dị na usoro nkwenye (Rashid et al. 2002; Drenner et al. 2006; Harper, Sen, and Frankowski 2007; Ekstrand et al. 2015) . Ọtụtụ n'ime ihe ndị a agaraghị ekwe omume n'enweghị ndị nchọpụta nwere njikwa zuru oke maka ezigbo ọrụ.
N'ụzọ dị mwute, ịmepụta ngwaahịa gị dị mfe, na ị ga-eche na ọ dị ka ịmepụta ụlọ ọrụ mmalite: nnukwu ihe ize ndụ, ụgwọ ọrụ dị elu. Ọ bụrụ na ịga nke ọma, ụzọ a na-enye ọtụtụ n'ime njikwa nke na-abịa site n'ịmepụta nnwale nke onwe gị site na ihe omimi na ndị na-arụ ọrụ na usoro ndị dị. Ọzọkwa, usoro a ga-enwe ike ịmepụta ebe a na-emeghachi omume na-edozi onwe ya ebe ndị ọzọ nyocha na-eduba na ngwaahịa ka mma nke na-eduga na ndị ọrụ ndị ọzọ na-eduga na ndị ọzọ na-eme nnyocha na ihe ndị ọzọ (nọmba 4.16). N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na ịghaghachi nzaghachi ziri ezi na-abanye, nchọpụta ga-adị mfe na mfe. Ọ bụ ezie na usoro a siri ike ugbu a, olileanya m bụ na ọ ga-abawanye uru ka nkà na ụzụ na-emeziwanye. Ruo oge ahụ, Otú ọ dị, ọ bụrụ na onye na-eme nchọpụta achọrọ ịchịkwa ngwaahịa, ụzọ kachasị mma bụ ijikọta ya na ụlọ ọrụ, isiokwu m ga-ekwu na nke ọzọ.
Ọgụgụ 4.16: Ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta ngwaahịa gị nke ọma, ị nwere ike irite uru site na nsụgharị nzaghachi ziri ezi: nchọpụta na-eduba na ngwaahịa dị mma, nke na-eduga na ndị ọrụ ndị ọzọ, nke na-eduga ọbụna nyocha. Ụdị nlele ndị a dị mma nwere ike ịmepụta, ma ha nwere ike ime nchọpụta nke na-agaghị ekwe omume ma ọ bụghị. MovieLens bụ ihe atụ nke ọrụ nyocha nke nwere ihe ịga nke ọma n'ịmepụta aka ntinye aka (Harper and Konstan 2015) .